You are here: Home / News / Kuvulwe udederhu lweevenkile KwaBhaca
Lo mbono uqale ngonyaka ka 1973 nalapho ongasekhoyo uMnu LCM Ludidi wathenga isakhiwo esidala kwidolophu yaKwaBhaca wasitshintsha wasenza iivekile ezintandathu. Kunamhlanje nje xa udlula kuhola wendlela uN2 onqumla kuledolophu ubona ngegama elikhulu lika tat’uLudidi phezukodederhu lwesakhiwo seevenkile ezintsha. Kaloku oku kuza emva kwenzame zokugcina igama likatat’uLudidi liphila. “nanjengoko utata nimazi ukuba zange abusiswe ngonyana, kodwa wayezixelela ukuba izakhiwo zakhe zizo ezingonyana bakho ngokoke njengabantu awabashiyayo sibona kunyanzelekile ukuba iphupho lakhe silifezekise” utshilo uMnu Shaka Langa nongumkhwenyana kwa tat’uLudidi.
Esisakhiwo nesineevenkile ezingamashumi amabini nantathu (23), iiOfisi ezintlanu (5) kunye neeKioski ezimbini sibonwa njengelinge lokuphucula ingeniso kunye nokudala amathuba emisebenzi kubemi boMzimvubu uphela.
Xa ungena kwesisakhiwo sakwaLudidi uyakwazi ukuphumela kwisakhiwo seevenkili esingasentla iNtsizwa Mall neneevenkile eziquka uMr Price, uRage, ibhanki kaFNB kunye noRhino. uRhino nothe wavulwa ngokusesikweni kutsha nje udale amathuba emisebenzi engamashumi alithoba nantathu (93) kulutsha oluphuma apha eMzimvubu kuphela. Ngethuba esenza intetho yakhe yokuvulwa kwalevenki uSodolophu uCllr BP Mabhengu uthe, “SinguloMasipala siyithande kakhulu kwaye siyikhuthaza into eyenziwenguRhino nalapho ethe wacela uCeba ngamnye walomasipala ukuba azise ngaphambili amagama amahlanu wabantu abadinga umsebenzi, singuMzimvubu sithi enkosi Rhino”.​​